Home Wararka Wafdi ka socda Somaliland oo ku sugan dalka Kenya
Wafdi ka socda Somaliland oo ku sugan dalka Kenya
Waxaa dhowrkii maalin ee ugu danbeeysay ku sugnaa dalka Kenya Wafdi ka socda Somaliland, gaar ahaan xisbiyda ka jira Somaliland. Guddoomiye Xirsi Xaaji Cali Xasan oo gudimiya xisbiga Wadani kana mida wafdigaas ayaa sheegay inay maalintii labaad ku gudo-jiraan kulamadda Safaaraddaha iyo dalalka Somaliland ka taageera qabsoomidda doorashooyinka iyo Dimuqraadiyadda, waxaannu sheegay inay kulamo la qaateen Safaaradda Canada oo uu sheegay inay ku cusub tahay arrimaha doorashooyinka Somaliland iyo Safaaradda Denmark oo ka mida dalalka Somaliland ka caawiya doorashooyinka.
“Maalintii labaad ayay weli noo socdaan kulamadii, waxaannuna kulamo kala duwan la qaadannay safaaradaha Denmark, Xafiiska EU-da ee Nairobi iyo Safaaradda Canada oo iyadu ku cusbayd arrimaha doorashooyinka Somaliland”.
Dhammaan kulamadaasi waxay noogu dhammaadeen is afgarad iyo guul, berritana waxaan leennahay kulamo kale oo muhiim ah, waxaanan rejaynayaa inay noogu soo idlaadaan guul iyo wanaag. Danta Somaliland ayaa inoo ballan ah.” Ayuu yidhi Guddoomiyaha Xisbiga mucaaridka ah ee WADDANI Xirsi Xaaji Cali Xasan